ANTOBY- MIARINARIVO : Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona
Hatramin’ireo olobe manana adidy goavana eto amin’ny Firenena aza amin’izao fotoana izao dia sahy manolan-jaza ihany koa. 26 novembre 2020
Teto dia ny Ben’ny tanàna mihitsy no nahavanon-doza, nanolana zazavavy tsy ampy taona, manodidina ny 14 taona tao Imerinimamo, fokontany Ambohimanana, Kaominina Antoby Atsinanana, ny 10 novambra 2020 lasa iny.
Ny angom-baovao voaray no nahalalana fa rangahy iray 54 taona, Ben’ny tanàna teo aloha tao Antoby Atsinanana, Distrikan’i Miarinarivo, Faritra Itasy no voalaza sy nahazoana porofo ho nanolana io zazavavy io rehefa nandeha ny famotorana ny raharaha. Ny faha-21 novambra 2020 vao nahazo ny fitarainana tamin’ny solontenam-panjakana tao Miarinarivo ny Zandarimaria. Noraisina avy hatrany, araka izany, ny andraikitra ka nanaovana fanadihadiana lalina. Nahitana porofo maromaro moa ny heloka vitan’ity farany ary efa niaiky ny hadisoany ity Ben’ny tanàna ity, ka natolotra ny fampanoavana ny talata faha -24 novambra 2020 ary naiditra am-ponja vonjimaika.
Manoloana ity herisetra mafampana tato ho ato ity dia tsy mitsahatra manentana ny ray aman-dreny mba hanara-maso akaiky ny taranany avy ka ho sahy hijoro, hitory ihany koa rehefa misy tranga. Na toy inona ireo fomba hanararaotana ireo zaza tsy ampy taona dia tsy azo ekena sy voararan’ny lalàna mifehy eto amintsika ary koa mahavoasazy hanao asa an-tery vozona ao anatin’ny taona maro.